Top Ten Best AHV DVD Player lagu bedelan karo
AHV DVD ciyaaryahan waa version ah Tifaftirayaasha caadiga ah ee codka digital iyo video. Waa horumar ah MPEG-2 ciyaaryahan ay sireed labo jeer ku ool ah oo wax badan ka wanaagsan yahay MPEG-2. Ma aha in dhamaan video ama DVD ciyaaryahan ka ciyaari kara HD DVD files. Sidaa darteed kaliya software iyo barnaamijyadooda gaar ah oo xadidan waxaa laga heli karaa in suuqa ay ku ciyaaraan files warbaahinta oo tayo aad u sarreeya. Ciyaaryahankii ma ciyaari karo kordhin file sida avi, DVD, Mpeg iwm, waxaa kale oo ay taageertaa gubashadii DVD iyo muuqaalada tafatirka. Marka laga reebo habkaani, haddii aad rabto in aad ka ciyaari files audio kaliya markaas waxaad fursad u haysataa ee regelingen ciyaaro, mp3, FLAC, m4a, off iyo kuwo kale oo badan. Iyada oo ay u qaabeynta Gudoomiyaha gaar ah, waxaad si fudud ku raaxaysan karaan dhawaaqa-agagaarka saamayn. Qaar ka mid ah ciyaartoyda waxay leeyihiin awood ay ku ciyaaraan files aad afkaaga u gaar ah doorbidayso.
Waxaa ka mid ah ciyaartoyda ugu fiican ee laga heli karo warbaahinta suuqa ilaa iyo haatan, laakiin waxa ay leedahay a hagardaamooyin yar marka loo eego ciyaartoyda kale ee suuqa aad wax sabab kasta in ay marka hore wax badan oo la barbardhigo sameeyo. Halkan waxa ku jira oo kale toban sare ciyaartoyda ugu fiican ee laga yaabo in aad fiiro qabtaan:
1. Hero DVD ciyaaryahan
Tani kaliya waxaa laga yaabaa in aad u geesi ah maalintii, ciyaaryahan dhisay si gaar ah u ah nooca baahida madadaalo sida ay leedahay software awood leh in uu ballan qaaday daawashada sare ee videos iyo dhawaaqa tayada ciyaaro madadaalo ah wanaajiyey ee your computer shakhsi. Ciyaaryahanka bixisaa waayo-aragnimo ugu fiican sida ay leedahay pad feature-hodan gacanta, feature ciyaaro jeeda, function zoom ah, ee aadka shil saxo si aad u disk functional iyo sidoo kale awood u processing caption ka mid ah DVD qaababka kale ee weyn.
2. ciyaaryahan SuperDVD
Haddii aad raadinayso deg deg jawaabaya, fudud, ugu wanaagsan ee tayada iyo taranka interface la wada qabanayo, ka dibna soo dhaweeyaa si ay waayo-aragnimo ku SuperDVD. Version asalka ah waxaa la dhisay si fudud inuu u ciyaaro kaliya DVDs halkan ka waxa uu leeyahay muuqaalada cajiib ah oo ay ku jirto; 5.1 taageero dhawaaqa, hal-click helaan menu, cutubka by navigation cutubka, isticmaalka luqada iyo awoodaha Cinwaan. Waxay leedahay tiro balaadhan oo ah awoodda multimedia, taageertaa WMA, MP3, AVI, VCD iyo xitaa ASF qaabab kaliya in la xuso dhowr ah. Waxaad u abuuri kartaa playlist u gaar ah, astaysto interface isticmaalaya hargaha iyo ka dhigi wareegtay video. Waa wax Player ah DVD yar, oo sahlan, laakiin xoog badan.
3. Fluendo DVD Player
Windows dhisay fudud Player DVD aasaasiga ah in uu leeyahay wax soo saarka dhawaaq aad u tayo leh oo loo maqli weyn u DVDs on your computer shakhsi. Ciyaaryahanka Taasi waxa ay noqonaysaa ujeeddo oo isku mid sida ciyaartoyda warbaahinta ugu iyo laga arki karaa shaashadda buuxa ama shaashad windowed oo uu leeyahay gacanta ku hayso feature qarin inta lagu jiro arkaysid. Waxa ay taageertaa subtitles iyo Dolby hareereeya uga dhawaajiyeen, laakiin habkaani aad u baahan tahay si ay u bartaan kaliya kaarka codka xaq u PC. Fluendo ma aha, malana xad ah Player laakiin waxay u adeegtaa baahida loo qabo, oo bixiya tayo sare iyo warbaahinta ku ool ah waayo-aragnimo u ciyaaro.
4. KMPlayer for Windows
Player Kale ganaax ka Windows. Player Tani waxay bixiyaan adeegyo badan oo muuqaalada; oo waxa uu xitaa u ciyaara daafaca, waayo, waxaad 3D videos! Marka ugu horraysa ee lagala soo bixi, KMPlayer, ayaa ah muuqaalada yar, laakiin inta badan oo ka mid ah sifooyinka gaar ah in yaab ka dhigi Player download, aad ka taxadartaa in kastoo aan si loo soo dajiyo codsiyada xisbiga saddexaad. App Tani waa weyn yahay ee la jaan qaada Windows XP iyo ka badan oo ka mid ah versions of Windows. Waxa ay taageertaa badan oo qaabab warbaahinta iyo waa halka luqadaha badan waqti isku mid ah ku siinayaa hargahood oo kala duwan oo uu ka soo xusho. Iyadoo Player, waxaad ciyaari karaa qaabab HD on telefishin in waxaa taageera app. App wuxuu kuu ogol yahay in la abuuro playlist gaar ah oo uu leeyahay barbaraha in la shakhsiyeeyo saamaynta audio aad.
5. WinX DVD Player
Tani waa mid ka Player waxaad u qori kartaa sida aan waxa aad u baahan tahay lahaa sababta oo ah muuqaalka sahlay iyo tiro ka mas`uulka ahaa muuqaalada, laakiin wax weyn u aad samayn karto haddii aad u jecel oo tayo leh. Iyadoo app this, wax kasta oo ku saabsan yahay tayo sare Cod dib ugu video ciyaaro iyo waxa ay sidoo kale taageertaa ugu qaabab warbaahinta. Player Wuxuu isticmaalaa qalab sahlay sidii ay toolbar socota illalintanada si aad shaashadda ama aad kaliya xaq-riix yaabaa shaashadda Player iyo maraan jidka aad si ay u isticmaalaya. A sabab ama laba si ay leeyihiin Player waxa ay kala yihiin; waxaa aad u ogolaanaya in ay qeybo ka mid bookmark aad video si aad u badbaadin karo la daawado ka dib iyo sidoo kale qaadan Screenshot laftiisa gudaha iyo waxaad samayn kartaa adiga oo playlist u gaar ah!
6. DVD X Player Pro 3.0
Tani waa sida ugu fiican ee wax badan ka. Waa app bilowga ah gobolka-free ama code-free Player sameeyay. Iyada oo ay feature Macrovision-free, waxaad ka arki kartaa DVD adiga oo isticmaaleya isticmaale qayb TV-aan faragelin ama dhabtii. Waxay leedahay taageero ah Operation-free kuu ogolaanaya inaad si gudub aan digniin FBI. X The DVD Player daro ah qaababka aad DVD celcelis Player iyo aad polishes leh oo dheeraad ah si ay u tagaan. Waxa ay taageertaa tiro balaadhan oo ah qaabab ay ka mid yihiin; Dolby ku hareereeyeen, DTS, Dolby Digital 5.1 (AC-3) oo dhowr ah qaabab kale iyo sifooyinka gaarka ah.
7. VLC DVD Player
Lacag ugu fiican ee la soo dhaafay, Salaadu VLC waa jawaabta haddii aad su'aal ahayd oo Player riwaayadaha ugu qaab warbaahinta. Dhisay xog la ', haddii aad ka heli Version 2 (Twoflower), waxa ay bixisaa interface cusub oo quruxsan, kelmadaha deg deg ah, waafaqsan in qaabab badan iyo awoodo si ay u taageeraan HD iyo BluRay. Waxaa ka mid ah qaar ka mid ah muuqaalada cajiib ah in la yimid Player yihiin; xasiloonida iyo karo, ogolaan Falanqeynta file sida ay downloads, muuqaal video-dhexgalka fiican oo kuu ogolaanaya in aad si aad u eegto channels sida: ESPN, Reuters iyo National Geographic. Wixii Windows ama Mac user ah, tani waa jawaabta ciyaaryahan multimedia baahidaada.
8. PowerDVD 14 Ultra
Doorashadaada kama dambaysta ah ee ciyaaro BluRay, videos 3D iyo filimada HD. Iyadoo TrueTheater Technology ay, waxa ay taasi daawashada filimka ka waxtar badan asalka ah. Isticmaalka feature daruur Cyberlink ah, u hagaagsan-ing, haynta, iyo wadaaga ah ee files warbaahinta, dhan yihiin, uruursanayey sare. BluRays mar walba jiidi inuu ku soo bilowdo, laakiin arrintan Player aad u hesho si dhakhso ah u bilowdo baaritaan. Player Waa arrin u gaar ah qaababka ay si Players kale gacan sare la siiyo.
9. WinDVD 11
Video Hufnaan weligii si la hubo ilaa aad ka hesho in ay isticmaalaan WinDVD 11 Player, iyo waayo-aragnimo la dhawaaqa weyn tiyaatarka-sida ku hareereysan. Oo maxaan kale, haddii aad ka soo dhamaadeen filimada u leedahay search engine online for filimada! Tani waa waayo-aragnimo ah ee sugaya ...
10. DVD uPlayer Player
Player A ganaax maadaama ay tani ka mid ciyaaraa filimada dhamaystirnayn jabay iyo sidoo kale, iyo sidoo kale ISOs aan unpacking files ay. Waxaa la socon kara inta badan qaabab aad u jecel yahay oo waa khafiif ah inaad kala soo baxdo.
Top Toban DVD Barnaamijyada Best Player u PC
Ma jiraan wax Online DVD gubi?
Best Nero Alternative for Windows 8/7 / Vista / XP
Free DVD Kan sameeyey Software in Guba DVD la Menu
Sida loo Beddelaan mod in DVD la mod in DVD Converter
> Resource > DVD > Top Ten Best AHV DVD Player lagu bedelan karo